सम्मोहन वजन घटाउने पाठ्यक्रमहरू - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | जुलाई 16, 2018 | हिप्नोथेरापी, तौल घट्नु, वजन घटाउने सल्लाह |0|
सम्मोहन वजन घटाउने पाठ्यक्रमहरू बढ्दो चिनार भइरहेको छ। त्यसोभए सम्मोहन के हो र सम्मोहन चिकित्सा तौल घटाउने राम्रो तरिका हो? सम्मोहन चिकित्सा फोबिया, चिन्ता, तनाव र अनिद्रालाई निको पार्न मल्लले म्याकेन्नाको मनपराउँदा प्रयोग गर्यो।
वजन घटाउने सम्मोहनले कारण हटाएर, खानालाई र खानेकुरा प्रति तपाईंको दृष्टिकोण बदल्न प्रयास गर्दछ, विश्वासलाई परिवर्तन गर्दछ र प्राथमिकता मानहरू ताकि वजन घटाउन सम्भव भयो।
तपाइँ कसरी सम्मोहन वजन वजन घटाउने कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको लागि सही छ? यी केवल केहि आधारभूत प्रश्नहरू छन् कि तपाईले कसरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नु अघि जवाफको आवश्यकता छ।
सम्मोहन वजन घटाउने पाठ्यक्रमहरू अनलाइन खोज्नका लागि सरल छन्, पहिले केहि अनुसन्धान गर्न निश्चित हुनुहोस्
ब्रूक एम मोर्ले द्वारा
तौल गुमाउनु भनेको केहि चीज हो जुन धेरै मानिससँग स struggle्घर्ष गर्दछन् र कहिलेकाँही वास्तवमै डाइटहरू भेट्टाउन गाह्रो हुन सक्छ।
यदि तपाईं आफूले चाहेको ठाउँमा पुग्न संघर्ष गरिरहनु भएको छ भने सम्भवतः तपाईंले डाइपोको विकल्पको रूपमा विचार गर्नुपर्छ जस्तै सम्मोहन तौल घटाउने कोर्सहरू जुन तपाईं अनलाइन पाउन सक्नुहुन्छ।
सही वजन वजन कार्यक्रममा आफूलाई प्राप्त गर्न कहिलेकाँही साँच्चै गाह्रो हुन्छ तर सम्मोहनको साथ तपाईं प्राय: जहाँ तपाईं चाँडो हुन चाहनुहुन्छ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ।
धेरै मानिसहरू कुनै चीजको समाधानको रूपमा सम्मोहन वजन घटाउने कोर्सहरू बारे अलिक सचेत छन् तर वास्तवमा यो धेरै व्यक्तिको लागि काम गर्ने प्रमाणित भएको छ।
सम्मोहनले अन्य थुप्रै चीजहरूको लागि पनि काम गर्दछ जस्तै यदि तपाईं धुम्रपान रोक्न चाहानुहुन्छ वा डरबाट हट्न चाहनुहुन्छ भने। कहिलेकाँही वेबमा तपाईले खोजिरहनु भएको कुरा पत्ता लगाउन यो सजिलो छ र यसैले वेब खोजी गर्नु नै तपाईको उत्तम विकल्प हो। तपाईसँग कलम र कागज राख्नुहोस् र केहि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुहोस्।
तपाईंले कुनै प्रकारको सत्र सुरु गर्ने निर्णय गर्नु अघि तपाईंले निश्चित रूपमा केही अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यो वेबमा तपाईले के खोजिरहनु भएको हो भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न सधैं राम्रो विचार हुन्छ। तपाईंको समय लिनुहोस् र गुगलको जस्तो केहि चीज प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई तपाईंको आवश्यकताको लागि उपयुक्त उपयुक्त विकल्पहरू फेला पार्न मद्दत गर्न।
केवल यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको सबै आधारहरु कभर र यो पक्का गर्नुहोस् कि तपाइँ केहि पनि साइन अप गर्नु अघि तपाइँ पूर्ण आरामदायक हुनुहुन्छ। तपाइँको समय लिनु पनि एक राम्रो विचार हो किनभने तपाइँ कुनै कुराको लागि हतार गर्न चाहनुहुन्न जुन तपाइँको लागि तयार हुनुहुन्न - यसलाई सुरु गर्न बिस्तारै लिनुहोस्।
समग्रमा, वेबमा सम्मोहन वजन घटाउने सत्रहरू खोज्न सजिलो छ। जे होस्, तपाईले धेरै अनुसन्धान गर्नु पर्छ यो निश्चित गर्नका लागि कि तपाई खुशी हुनुहुन्छ केहि चीज तपाईले साइन अप गर्नुभयो। केवल याद गर्नुहोस् कि सम्मोहनबाट तपाईलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईले खोज्नु भएकोमा निर्भर हुन्छ।
लेखक ब्रूक एम मोर्ले वेबमा सम्मोहन वजन घटाउने सत्रहरू फेला पार्ने बारेमा कुरा गर्छन्। https://www.hypnoticsolutions.co.uk सँग विकल्प र जानकारीको विशाल दायरा छ, तपाईंले आफूले खोजिरहनु भएको चीज सजिलैसँग भेट्नुपर्दछ।
धेरै व्यक्तिहरूले वजन कम गर्ने बारेमा बढी सिक्ने उत्तम तरिका फेला पार्दछ एमपी3/ सीडी प्रयोग गरेर जुन तपाईं आफ्नै सुविधामा खेल्न सक्नुहुनेछ।
वजन घटाउनु व्यक्तिगत हो। यो सम्झन यो वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ कि हामी सबै फरक छौं र के काम गर्छ तपाईंको लागि यसले काम नगर्न सक्छ। यदि तपाईं आफूले चाहेको वजन घटाउन सफल हुन चाहनुहुन्छ भने, यो केवल तपाईंको लागि काम गर्ने फेला पार्ने मामला हो।
तपाईं पनि पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत विकास पुस्तकहरू र NLP प्रविधि तपाईं आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई एक विधि चाहिन्छ जुन तिनीहरूका लागि काम गर्दछ। यो हुन सक्छ कि तपाई कसैको सहयोगमा काम गर्न रुचाउनुहुन्छ। तपाइँ एनएलपी व्यवसायीहरू वा तपाइँको क्षेत्र वा अनलाइनमा जीवन कोचहरू पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँसँग तपाइँको वजन र अन्य मुद्दाहरूको समाधान खोज्नको लागि काम गर्न सक्दछ। NLP लाइफ कोच निर्देशिका.
यदि तपाईं एक टिप्पणी छोड्न चाहानुहुन्छ भने, प्रश्नको उत्तरको रूपमा चाहनुहुन्छ वा अरूसँग तपाईंको वजन घटाउने वा सम्मोहन उपचारको ज्ञान साझा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं तल हाम्रो टिप्पणी फारम प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सबै टिप्पणीहरूको समीक्षा गरी सकेसम्म चाँडो पोष्ट गरिनेछ।
पछिल्लोकसरी तनावले वजन बढाउन सक्छ
अर्कोकसरी प्रभावकारी CV व्यक्तिगत प्रोफाइल लेख्न कि तपाइँ बिक्री गर्दछ